काठमाडौं, १० वैशाख– टाउको दुखेमा सकेसम्म सहने र अत्याधिक पीडा भएमा मेडिकलबाट ‘पेन किलर’ किनेर खाने नेपालीको बानी छ ।
टाउको दुख्ने समस्यालाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । तर टाउको दुख्ने समस्यालाई समान्य रुपमा लिँदा त्यसले दिर्घकालिन रुपमा अन्य असर समेत गर्न सक्छ । त्यसैले टाउको दुख्नुलाई सामान्य रुपमा नलिन चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
टाउको दुख्ने समस्या विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन्छ । स्नायु सम्बन्धि समस्या तथा अन्य रोगको कारण टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । टाउको दुख्ने विभिन्न कारण मध्ये माइग्रेन पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
टाउको दुख्ने समस्या लिएर अस्पतालमा आउँनेहरु मध्ये ३० प्रतिशत मानिसमा माइग्रेनको समस्या देखिने गरेका ग्राण्डी अस्पतालका न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर विवेक रौनियारले बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘माइग्रेन न्यूरो भाष्कुरल कन्डिसन हो । माइग्रेन कमन कन्डिसन हो । मस्तिस्कमा हुने रक्तनली सुन्निएर वा फुलेर नसाहरु तन्किन्छ । जसले टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ ।’
डा. रौनियारका अनुसार माइग्रेनका लक्षणहरु यस्ता हुन्छन्
दुखाइसँगै वाक वाक लाग्ने, वान्ता हुने समस्या हुन्छ ।
केही कार्य गर्दा दुखाई अझै बढ्ने ।
माइग्रनको लक्षण सबैमा एउटै हुँदैन । डा विवेक रौनियारका अनुसार माइग्रेनको दुखाइ हुने धेरै कारण हुने भएपनि प्रमुख कारणहरु यस्ता छन्
रोगबारे जानकारी नहुँदा गलत उपचारमा पैसा र समय खर्च
माइग्रेनको कारण टाउको दुख्ने समस्या भएपनि नेपालमा माइग्रेनको विषयमा जनचेतना नहुँदा बिरामीहरुले सही उपचार पाउँन सकेका छैनन् । माइग्रेनको विषयमा जनचेतना नहुँदा बिरामीले अनावश्यक रुपमा खर्च मात्रै गर्नै गरेको र ठिक भने नहुँने गरेको डा. रौनियारले बताए । मानिसमा रोगको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नहँुदा सुरुकै अवस्था माइग्रेनको उपचारमा ढिलो पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘धेरै माइग्रनेका बिरामीहरु आँखा चेकजाँच गराउँने सिटि स्क्यान तथा एमआरआइ गर्ने गर्छन् । अन्य कारणले टाउँको दुखेको हो कि भनेर पत्ता लगाउँनु ठिकै हो । तर माइग्रेनको दुखाइ आँखामा चस्मा लगाएर र एमआरआइ गरेर ठिक हुँदैन’ उनले भने,‘माइग्रेनका बिरामी सुरुकै अवस्थामा उपचार गर्न न्यूरोलोजिस्टकोमा आइपुग्दैनन् ।’
माइग्रेन के कारणले हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक आधार नभएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर परिवारमा कसैलाई माइग्रने छ भने त्यसको वंशाणुबाट उसका सन्ततिमा पनि सर्ने गरेको डा. रौनियारले बताए । माइग्रेन कुनैपनि उमेर समुहका मानिसमा हुनसक्ने भएपनि प्रायजस्तो किशोरीको रजस्वला हुने उमेर मा देखिने गरेको उनको भनाइ छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरुमा माइग्रेनको समस्या बढी हुने गरेको छ ।
टाउको दुख्ने समस्या भएमा सबैभन्दा पहिला पेन किलर खानु भन्दा पनि न्युरोलोजिस्टसँग सल्लाह लिएर उपचार गराउन उपयुक्त हुने उनले बताए ।
चिकित्सकहरुले माइग्रनेको उपचार दुई किसिमले गर्ने गरेका छन् । डा.विवेक रौनियारका अनुसार माइग्रेनको एट्याक आउँन नदिने र अर्को माइग्रेनको एट्याक आइरहेको समयमा टाउको दुखाइलाई कम गर्ने दुई किसिमको उपचार हुन्छ ।
‘प्रपर एक्टिभ र एभर्टिभ टिटमेन्ट गरी दुई किसिमले माइग्रेनको उपचार हुन्छ । प्रपर एक्टिभ भनेको माइग्रेनको एट्याक आउँन नदिने हो । यस्तै एभर्टिभ टिटमेन्ट भनेको माइग्रेनको एट्याक भइरहेको अवस्थामा दुखाई कम गर्ने ।’ डा. रौनियारले लोकान्तरसँग भने, ‘ महिनामा दुई पटक भन्दा बढी माइग्रेनको दुखाइ छ भने हामीले प्रपर एक्टिभ उपचार गछौं ।’
बजारमा माइग्रेनको उपचारको लागि बजारमा ६,७ किमिकको औषधिहरु बजारमा भएको भन्दै डा. रौनियारले बिरामीको उमेर, एट्याकको किसिम हेरेर प्रपल एक्टिभ उपचार गर्ने गरेको बताए । विरामीको अवस्था हेरेर सामान्यतय ६ देखि ९ महिनासम्म औषधि सेवन गर्न लगाउँने गरेको उनको भनाई छ ।
यस्तो उपचारमा कतिपय विरामीको माइग्रेनको टाउको दुखाई दुई देखि ५ वर्षसम्म आउँदैन । कतिपयलाई भने ६ देखि दुई वर्ष सम्म बन्द हुने गर्छ ।
यस्तै अर्को उपचार पद्धति एभर्टिभ टिटभेन्ट अर्थात माइग्रेनको दुखाई भइरहेको अवस्थामा दुखाई कम गर्ने उपचार हो । यसका लागि दुखाई कम गर्ने पेनकिलरहरुको प्रयोग गरिन्छ । तर यस्तो औषधि नियमित सेवन गर्दा ग्यास्ट्रिक,अल्सर, किड्नीमा समस्या हुने डा. रौनियारको भनाई छ । कहिलेकाही प्रयोग गरेपनि यस्ता औषधिहरु नियमित सेवन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
माइग्रनेको दुखाइ कम गर्ने र केही समयलाई नियन्त्रण गर्ने उपचार पद्धति भएपनि पूर्ण रुपमा निको बनाउने वैज्ञानिक कारण भने नभएको उनले बताए । स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउँदा माइग्रेनको एट्याक कम हुने उनको भनाइ छ ।